Ngabe amabhayisikili ameva ayakufanelekela? - Amabhayisikili
Main > Amabhayisikili > Amabhayisikili anameva - izinqumo ezingokoqobo
Amabhayisikili anameva - izinqumo ezingokoqobo
Ngabe amabhayisikili ameva ayakufanelekela?
Kuyigugu langempela ukugibela, futhi njalo kuyinto ejabulisayo. Akushibhile, kepha lokhuibhayisikilikuyintokuwufaneleisenti ngalinye.Amevaiqiniseka kakhulu ukuthi uzothanda noma iyiphi ye-Rohloff yayo efakweamabhayisikiliukuthi uma ugibela eyodwa izinsuku eziyi-100 futhi kungenjalo, 'waneliseke ngokuphelele', inkampani izokubuyisela imali yakho.
Kepha ake sifinyelele kusibonelo sokuqala. Ekuqaleni, i-tubeless ilula. Ake sikufakazele lokho esikalini engisibeke lapha erimu lami elikhanya kakhulu lekhabhoni le-FSA.
Ngemuva kwalokho sizofaka isondo. Kulungile, ngakho lokho kusinda ku-1,615. Futhi ekugcineni sifika kubhavu wangaphakathi e on.
Uma ngingathola imbobo ye-valve, ngizovele ngiyifake ethayeleni. Ngakho-ke manje ake sengeze ama-100 mils we-tubeless sealant. Lokho kungiletha kulayini lapha.
Kulungile, ngakho-ke lokho bekuyisiqeshana sokugcina se-sealant yami. Ngine-100 mil kuyo, lelo inani elifanele ibhodlela ngalinye, futhi linesisindo esingu-1.74 kilograms.
Lokho kukhanya ngokuphelele ngamagremu ayi-100. Inganekwane eyodwa iqedile ngoba i-tubeless ilula. Kulungile, ngakho-ke sikhombisile ukuthi ukusetha okungenasifo kusindisa amagremu ayi-100 ngevili ngalinye le-spar.
Kodwa kusho ukuthini lokho ngebhayisikili? Ngoba uzokonga isisindo esithile sokujikeleza. Well, mass rotational is the mass that is actually always moving, ngakho izinto yindlela amasondo akho abe nethonya elikhulu lapho. Nokho, lokho kufana nohlaka uqobo noma ngisho nokushaqeka ebhayisikili.
Silondoloze amagremu angama-600 ukwenza ngcono okulula futhi okulula okungeke kukubize kakhulu. Manje konke lokhu kwenziwa ngefomula yomzuzu we-inertia. Uma sinabanye ososayensi laphaya, singathanda ukukufakazela ukuthi siqinisile, noma ngabe sinamaphutha.
Ungasazisa esigabeni sokuphawula ngezansi bese ngizomaka umsebenzi wakho. Ngakho-ke sifunde ukuthi i-tubeless ilula, unokujikeleza okuncane nesisindo, kepha kuthiwani ngathi? Ngifuna ngempela ukwazi ukuthi uzoba namakhethini ambalwa? Ngakho-ke ake sikuhlole. Ngoba nginesondo ku-jig.
Ngizothatha ithuluzi lami lapha, ngameva. Sizokhipha isondo bese sifaka imbobo kulo bese siyabona ukuthi liyavalwa yini. Ngakho-ke ingabe ukulungele lokhu? Ntathu, kubili, munye futhi ngizothola amathuluzi ami okuzokhathala. (Umsindo we-Hissing) Kulungile, ungezwa umoya uphuma.
Ake siyisonte futhi ngethemba lokuthi sizoyivala. Kulungile, sine-sealant ephuma. Awukho umoya ophunyukayo.
Ngakho-ke lokho kufakazela ukuthi i-sealant, ukusethwa okungenasifo kwawenza umsebenzi wawo. Manje uma ubunephubhu kuleli sondo bekungaba umdlalo uma ubhoboza i-init njengoba ubungeke ukwazi ukuvala ishubhu. Umoya uzobaleka futhi ukuhamba kwakho kuzophela. lokho ngomunye umkhaza ongenasifo.
emabhayisikili anamasondo amakhulu
Idlula phakathi kwesondo bese ishaya ishubhu erimu. Manje lo mthelela, ngoba uhlangana nezinto ezimbili futhi ishubhu liphakathi kwalo, ishubhu empeleni licinene futhi lokho kubangela ukulunywa yinyoka. Lezo zimbobo ezimbili ezincane, ezicishe zifane namazinyo enyoka, ha ngangena kuleyophayiphu mina futhi lokho kudala isondo.
Ngikhuluma ngama-PSI amabili, amathathu, amane. Konke kuza ekuhlolweni okuncane ngoba awufuni ukuthi isondo ligingqike noma libhodle ngaphansi kwakho. Ngakho thatha leli thayi ngengcosana kasawoti.
Linga kancane. Khipha i-PSI. Uzoba nokubambelela okwengeziwe, okusho ukuthi uzokwazi ukugibela lezo zikhathi ezinzima futhi uzokwazi ukuthatha ikhefu ezimbalwa kamuva.
Okusho ukuthi kusho ukuthi uzoshesha futhi ujabule ngokwengeziwe. Kulungile, ngakho-ke esivivinyweni sethu sesihlanu nesokugcina, nginezimbili? Amasondo lapha. Amarimu ayafana, amathayi ayafana nengcindezi ngaphakathi iyafana.
Umehluko kuphela ukuthi lena ineshubhu futhi lokhu, kahle, akunashubhu ngenza isivivinyo sengcindezi esincane ukukubonisa lapho bekhubazeka ngaphansi kwengcindezi. Ngakho-ke lapho ngikhama lena eneshubhu, ungazizwa ukuthi kunzima kakhulu ukukhubaza isondo. Lapho ngithatha isondo lami elingenashubhu empeleni kuba lula kancane ukukhubaza lelo thayi.
Ukuthi awunawo amashubhu angaphakathi kusho ukuthi ukumelana okuncane kuyadingeka ukukhubaza isondo. Lokhu kusho ukuthi unxephezela ama-bump ngaphezulu kancane. Izongenisa eminye yaleyo mithelela emincane.
Mhlawumbe uma ushayela phezu kwezimpande ne-rockat ngejubane elincane, kuzokunikeza nje uhambo olushelelayo. Lokhu akubonakali kangako kuningi labashayeli. Kepha uma ugibela ezingeni eliphakeme kakhulu, yonke inzuzo encane iyasiza impela.
Ukuqhubeka ngamaqiniso ambalwa mayelana nokuthi kungani ufuna ukungabi nasifo sofuba. Ngiyethemba ngonakalise inqwaba yezinto futhi ngakutshela ukuthi kungani ungafuni ukwenza i-tubeless. Kulula kakhulu, futhi kungukuthuthuka okuhle kangangoba awusoze wakufuna.
Ngemuva kwalokho mane uchofoze lapho ukuya ku-Tubeless bese uchofoza phansi lapho ukusetha ingcindezi yakho yesondo. Uma uthole le ndatshana ilusizo, yabelana ngayo nomngani bese usinika isithupha njenge-b-up.
Enziwa kuphi amabhayisikili ameva?
Ngokuhamba kwesikhathi, ibhayisikili lakho lasentabeni lizohlala likhombisa amamaki empi lapho uphumile futhi usuzohamba. Noma ngabe kugxumagxuma nje ematsheni futhi kushaya umsebenzi wakho wokupenda, ukuwa okuyishwa, ukubeka ibhayisikili lakho ngemuva emotweni, amafolokhi aphezulu, konke lokho, kuzothuthukisa ukuphela kwebhayisikili lakho. Ngakho-ke lokho ofuna ukukwenza ngokweqiniso ukukugcina ngefilimu ethile evikelayo.
Namuhla ngizohlanganisa ibhayisikili likaNeil elisha sha. Ngakho-ke, qala lapha ngokuvumelana okuhle, qiniseka ukuthi kubukeka kukuhle futhi kukuhle kusukela ekuqaleni. Kepha akudingeki ukuthi ube nebhayisikili elisha ukwenza lokhu.
Ungakwenza lokhu kubhayisikili lakho ebelivele likhona futhi uqiniseke ukuthi umsebenzi wakho wokupenda ubukeka umuhle njengoba wenza manje kuze kube usuku okhetha ngalo ukuwuthengisa. (Ukuqhuma komlilo nokuqhuma) Ngakho-ke, amathuluzi omsebenzi: Okokuqala udinga uhlobo oluthile lwento yokuvikela ifreyimu, iteyipu ethile ye-mastic, iteyipu kagesi, izibopho ze-zip, i-bike cleaner, i-isopropyl alcohol, isikele futhi, uma kunesidingo, isomisi sezinwele noma ukushisa . Izinto zokuqala kuqala, udinga uhlobo oluthile lwekhithi yokuvikela ifreyimu.
Kunezinhlobo eziningi ezitholakalayo emakethe. Kusuka kokuyisisekelo okufana nalokhu okunqunywe kusengaphambili ngezingxenye ezahlukahlukene zebhayisikili. Noma ungazitholela i-3M heli-tape, eza ngamashidi afana naleli noma ngama-roll, noma ungakhetha ikithi eligcwele eligcwele kumuntu ofana ne-Invisiframe abenza ukukala ibhayisikili ngalinye.
Vele siye ngenketho elula lapha ngoba yinhle futhi ishibhile, iyabiza, kulula ukuyifaka. Ngakho-ke ngaphambi kokuthi uhanjiswe ngokunamathisela izinto kokunye, uzofuna ukuqinisekisa ukuthi ibhayisikili lakho lihlanzekile ngokuphelele ezindaweni lapho uhlela ukunamathisela khona itheyiphu. Uma ibhayisikili lakho lenziwe nge-aluminium, ufuna ukuqiniseka ukuthi ifreyimu ifudumele.
Ngakho-ke yishiye ngaphakathi ubusuku ngaphambi kwesikhathi, noma vele ushise izingxenye zepayipi ngesomisi sezinwele uma kunesidingo. Akukho ukuchichima okudingekayo. Lokhu kwenzelwa ukunamathisela izinto ngokunamathela kahle kufreyimu.
Ngohlaka lwekhabhoni akuyona inkinga encane ngoba nje impahla izwa ifudumele. Ngakho-ke njengoba singasebenzisi uzimele ogcwele sisebenzisa kuphela amabala amancane akhethiwe, sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi siwabeka ezindaweni ezifanele ebhayisikili ngifuna izindawo lapha lapho amatshe nezinto ezizothinta khona lapho fly phezulu. Izindawo lapho izintambo zizothinta khona ifreyimu, uma ukumiswa kungenzeka kuhamba noma izibambo zijika, nezinye izindawo futhi.
Ishubhu ephezulu, kuhle lokho okudala, lapho amaphedi akho amadolo ehlikihla khona ngeshubhu futhi avele abe buthuntu ekuqedeni. Ngakho-ke ake sibheke ukugqoka. Ngakho-ke ake siqale ngeshubhu ephezulu kuqala.
Bheka ithubhu ephezulu lapha ngebhayisikili likaNeil. Nginengxenye ende kunazo zonke kukhithi. Indawo esemqoka engigxile kuyo empeleni yisigaba esimpunga lapha phakathi kwejika elisesihlalweni sesihlalo lapha nejika ngqo ezansi kwethubhu ephezulu.
Ngakho-ke okudingayo ukuthi ukubhekisise iqiniso lokuthi ifreyimu ine-curvature. Ngakho-ke lokhu kuzokwenza kube nzima uma wenza ukuxhumana okuhle ukuze lokhu kunamathele. Ngakho-ke ngizoyisika le phansi phansi ukuze iphele lapha ngoba ayisoze yathola ukusetshenziswa okuningi futhi nje ukuqiniseka ukuthi iyazungeza ngezansi lapha.
Ukwenza lokho, i-stencil kuwumqondo omuhle. Ngakho-ke ngenze ithempulethi lephepha umzuzwana owedlule. Kumane kuqondane lapha kulandele cishe isimo engifuna ukusika emzimbeni omkhulu indawo yeshubhu ephezulu uNeil azobe egcoba ngayo idolo lakhe nezinto lapho esendleleni.
iqanda elimhlophe lokwakha imisipha
Futhi akuphazamisi kakhulu emigqeni yebhayisikili futhi. Ngakho-ke ngivele ngasebenzisa i-stencil ukwenza uhlobo lokusika umumo ngendlela engifuna ngayo. Okufanele ukukhumbule nje ukuthi uma uzisika ngokwakho, ungashiyi noma yimiphi imiphetho eyisikwele ngoba uma iphakanyiswa noma yikuphi uzoyibamba lapho.
Ngakho-ke vele unqamule imikhawulo emincane, eyindilinga ukuze ihlale endaweni yayo noma ngabe isimo sezulu sinjani. Le khithi ethile ingena nje kushubhu elihlanzekile nelomile bese umane ukhipha amagwebu omoya ngesandla. Kepha amanye amakhithi afana nezinto ze-3M atshela abantu abaningi kungcono ukubenza bamanzi besebenzisa uhlobo oluthile lwe-shampoo noma i-detergent.
Uxuba amanzi, ufafaze ngawo, untanta ikiti uzungeze lize libe sendaweni efanele, bese usebenzisa i-squeegee ukukhipha ngobumnene uhlobo lomswakama futhi izolisiza linamathele endaweni ekahle, kungakhathalekile ukuthi uyithengi , ulandela nje imiyalo efanele. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi uyibeke ngokusemandleni akho ukuze ihlale ebhayisikili lakho isikhathi eside ngangokunokwenzeka futhi, okubaluleke kakhulu, ibukeka iyinhle impela. Awufuni ukuhehwa kunoma yimaphi amagwebu ohlobo lweplastiki.
Ngakho-ke, ngivele ngiqale ekugcineni kwethubhu yekhanda, ngasohlangothini lwekhabhoni lapha bese ngimane ngibe maphakathi nendawo. Manje angizukulenza ikhasi ngokushesha. Ngizomane ngikwenze o phezulu bese ngiyakugobisa ngemuva kwalokho.
Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyayiqondanisa ngangokunokwenzeka. Vele lawa makhithi ashibhile futhi kulula kakhulu ukuwafaka uma engahambi kahle atshale imali kwelinye lama-kits kasayizi ogcwele amboza konke, udinga ngempela ukuthatha isikhathi sokuwafaka futhi angasebenza namanye ama-fiddly More ukwakheka kohlaka kuthatha amahora ambalwa. Lokhu esikwenzayo lapha ebhayisikili likaNeil kumboza enye kuphela yezindawo ezimbili lapho ethola khona ukuthikamezeka emabhayisikili akhe.
Ngikubonile lokhu kumabhayisikili wangaphambilini. Manje konke ofuna ukukwenza ukuthatha isikhathi sakho futhi uqiniseke ukuthi kuhamba kahle ngangokunokwenzeka. Akunabhamuza lomoya.
ungabala kanjani ama-macros
Izobukeka kahle isikhathi eside. Kungumqondo omuhle ukukwenza lokhu ngaphambi kokuba ibhayisikili lakho likhule kakhulu futhi lifiphazwe. Futhi ngeke wazi ukuthi ukuvikeleka kukhona.
Futhi kungumqondo omuhle ukubeka lokhu ekwenzeni ngaphakathi ezindlini ukuze uqiniseke ukuthi i-glue ihlala inhle futhi ifudumeza ithuba elihle kakhulu lokubopha ifreyimu yakho kahle. Ngakho-ke, phezulu lapha kushubhu yekhanda, lokhu ngokusobala ukuphela kwebhayisikili ebhizinisini. Unezintambo nezilawuli.
Ngakho-ke, ebhayisikilini likaNeil elikhethekile, unentambo yokwehlisa intambo futhi ikhebula lakhe lamabhuleki langemuva liphuma ngasohlangothini lwesokunene sepayipi lekhanda lapha. Isiqondisi sakhe sangaphakathi nje lapha. Futhi uyabona ukuthi bahlikihla ngepayipi lekhanda lapha ngaphansi kwesiteringi esigcwele nokukhiya.
Sifuna nje ukuqiniseka ukuthi ivikelwe ngaphansi ukuze ingagugi futhi ilahlekelwe umbala wayo. Futhi okuphambene nalokho. Ngakho-ke ikhebuli yakhe yangemuva yesipelesi.
Ngakho-ke ngizokwenza umaki lapha lapho sifuna khona ukuvikelwa. Ngiyaphinda ngiyakusika lokhu ukuze kubukeke kucocekile njengoba kuthola. Ithole kahle.
Ufuna nje ukuyisusa phakathi. Ngale ndlela ngingaqiniseka ukuthi ihlelwe ngqo lapho ngifuna ukuba khona, njengoba nje ngenzile naleyo eseshubhu ephezulu. Ngakho-ke ungayibona iseduze, lokho kungenye yezinto ezimbi ngento enjengaleyo.
Kepha kuyikhithi yokuvikela ifreyimu. Ngokuhamba kwesikhathi, uma ungaqali ukulahlekelwa umsebenzi wakho wokupenda, uzokubonga ngalokho. Manje loluhlaka oluthile lunomvikeli weshubhu phansi phansi.
Amatshe andiza phezulu, kepha lutho phezulu kwepayipi. Cishe ngeke uthole amadwala endiza futhi alimaze ishubhu lakho kuleyo ndawo, kepha uma uthatha iveni yakho yomngani lapho uncika ibhayisikili emhlane wakho, kungenza iphedi enhle, esebenzayo lapha, ukuvimbela kuphela ifreyimu yakho ukuxhunyaniswa nephedi yokuthwebula ehlala ngaphesheya ngemuva. Lapho ufaka lokhu kushubhu phansi kubalulekile ukubheka kuphela ukugobeka kweshubhu. njengaseshubhu ephezulu.
Ngibonile ukuthi uma ngiphendulela ngaphambili ohlangothini, le ndawo yonke idinga ukuvikelwa. Cishe phansi ukusuka emaphethelweni angaphambili. Ngakho-ke lobu empeleni bubude obuhle futhi bugoqa phansi okungenhla.
Ngibonile ukuthi empeleni icishe ibe pe. ihlala lapho i-grey ihlangana khona ne-orange. Ngakho-ke yenza umugqa omuhle ngethemba lokuthi uzohlangana kahle nohlaka.
Manje sengiyazi ukuthi sengikulinganise lokhu, kufanele ngihambe cishe izigayo ezimbili ngaphansi kwalowo mugqa futhi izohambisana kahle ukuze ukwazi ukubona umphetho kalula, kepha uma usuhambile kancane ngeke usakwazi ukuwubona. Futhi okubaluleke kakhulu, uma ebeka ibhayisikili lakhe ngemuva elolini yomngani wakhe ngiyazi ukuthi unalo futhi mhlawumbe ubuka le ndatshana, lizohlala kahle lapho, ngeke lisuse umsebenzi walo omncane omuhle wopende. Kulungile, ngakho-ke ibhayisikili likaNeil linomhlahlandlela wangaphakathi kushubhu ephansi lapha futhi lapho ikhebula liphuma khona, lapho lixhunywe khona esihlalweni futhi liqonde ngqo entanyeni, lingaduma ngandlela thile, ngandlela thile lixhumane nesihlalo ishubhu lapho.
Futhi okufanayo ngakolunye uhlangothi lwe-disc brake disc. Ngakho-ke, ngizobeka okuncane ezansi lapha ukuze ngiqiniseke ukuthi isiphetho se-varnish sihlala kahle ngangokunokwenzeka isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Kukhona ezinye izingxenye ezenziwe ngaphambilini lapha ezingusayizi ofanele.
Ngakho-ke, eyodwa yazo nje, futhi ngizosebenzisa nje isiqeshana sokwesekwa esengivele ngikusebenzise lapha ngemuva, kunjalo, izingxenye ezincane zingabonakala kancane lapha. Uma ugibela iClifton, cishe uzothola ukuthi izinyawo zakho azihambi kakhulu. Kepha ngiyazi ukuthi uNeil uthanda ukugibela amapheya ayizicaba kancane, futhi enye yezinto abagibeli bezinyawo eziphansi abajwayele ukuba nayo ukuguqulela phansi unyawo lwabo phansi.
Ngakho-ke imvamisa uthola izingxenye zezihlalo nezokuhlala ngamaketanga, umbala wazo ohlikihlwayo kuphela emaqakaleni. Futhi akukubi ngempela ukugibela, iqiniso nje ukuthi uhamba kahle kakhulu. Ngakho-ke nginokwanele lapha futhi ngosayizi omuhle impela ukuvikela ukuhlala kwesihlalo ebhayisikili likaNeil ezinhlangothini zombili, futhi ngokufanayo nezinye izigaba, ufuna nje ukuqiniseka ukuthi banamaphethelo ajikelezayo ukuze babe nethuba elihle loku hlala isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
Nakulokhu uyabona ukuthi leyo ngxenye isendaweni, kepha ukude ngeke wazi. Futhi uma izithende zakho zigcoba ukuhlala esihlalweni, ngeke ulahlekelwe yimuphi umbala. Into elandelayo engiyibonile kuleli bhayisikili leNukeproof ukuthi kukhona isivikeli esihle kakhulu se-chainstay lapha eselulela emuva emuva lapho othintana nabo beketanga bexubana khona nochungechunge.
Ngakho-ke lokhu kumnandi. Kepha ngiphinde ngabona ukuthi akukho lutho ezansi lapha, ngizohlanza ingaphakathi futhi ngisebenzisa le tepi yomlingo kusuka ku-3M, ngakho-ke lena yitape mastic tape, ngakho-ke iyitape kagesi ngokuhweba, kepha empeleni ingenye yezinto ezinhle kakhulu emhlabeni umshayeli webhayisikili angaba nazo. Ngakho-ke, empeleni iyitape elihlanganisayo elinamathela konke ndawonye futhi linikeze ukuvikelwa okuhle kakhulu kohlaka lwakho.
Yize ukungezwani kwamaketanga kuhle impela kulezi zinsuku nge-clutch mech. Ngiyazi ukuthi uNeil ushayela kanjani ngakho ngizovele ngihlanze kancane kancane ngezansi lapha. Ngiyazi ukuthi uthanda ibhayisikili elithulile njenge-w So, lokho kukwenza ngasese.
Ngizokwenza konke lokhu okukodwa. Ngakho-ke sengivele ngakuhlanza lokho. Kuzohlala phansi ngezansi kanjalo.
Uzobona ikakhulukazi umphumela wokuthula kubhayisikili lakho lapho ugibele izindlela eziningi ezimangelengele, ezinamadwala futhi ezisheshayo futhi amaketanga akho eshaya izandla nxazonke. Empeleni kufanele uyihlole kuqala ukuze ubone ukuthi uchungechunge lwakho lusaqhubeka yini ngoba wenza ibhayisikili lakho lithule kakhulu, kuluhlobo lokuhamba olwesabekayo. Ngobuncane obungenalutho bamakhithi wokuvikela amafreyimu ashibhile, uNeil ukwazile ukugcina ishubhu lekhanda livikelwe kahle ekulimazelweni ikhebula, ishubhu phansi lapho elifaka ngemuva kwepiki, ishubhu eliphezulu lamadolo akhe amadolo, lokho kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu eyodwa, futhi nakwezinye izintambo ngakho.
Futhi-ke ukwazile ukusebenzisa injoloba ukuhlunga izihlalo zakhe zamaketanga nokuhlala izihlalo. Ngakho-ke kuyindlela enhle impela enkulu yokuvikela ibhayisikili lakho nokwenza libukeke kangcono isikhathi eside futhi-ke, ukuze uphumule futhi. Sethemba ukuthi bekulusizo kuwe.
Ukuthola ama-athikili ambalwa, hlola ukuthi ibhayisikili lakho ulisebenzisa kanjani ebusika, lokhu kuzovikela ibhayisikili lakho ebusika nazo zonke izinto ezimbi ezenzekayo. Ungakhohlwa ukuchofoza kuglobhu esembindini ukuze ubhalise. Indatshana entsha sha nsuku zonke efana nalena.
Futhi-ke, uma uthole ukuthi le ndatshana ilusizo, sinikeze isithupha.
Yini okufanele ngiyibheke ebhayisikili elihle lokuvakasha?
AmevaImijikelezo yenkampani ingudade kuSt John Street Cycles futhi singabakhiqizi bohlu oludume kakhulu lwe-Amevaukuvakasha amabhayisikili. Sihlinzekela imakethe yokubuka amabhayisikili eqondayo neyokuhlangana. Sisebenza kuphela emagcekeni ethu lapha eBridgwater.
Ngenza uchungechunge lapho ngenza khona konke okuyisisekelo kokuvakasha ngebhayisikili. Futhi kule ndatshana yesibili sikhuluma ngokuthi yini okufanele uyibheke lapho uthenga ibhayisikili lakho lokuqala lokuvakasha.
Ukubuka le ndatshana kuzokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi yini eyenza ibhayisikili elihle lokuvakasha kanye nezingibe okufanele uzigweme lapho uthenga ibhayisikili amahora amahlanu kuya kwayisishiyagalombili ngosuku uma unentshisekelo yokuba nebhayisikili elinethezekile kunokuba nebhayisikili elisheshayo . Ijometri lebhayisikili lokuvakasha likhululeke kancane kunalelo lebhayisikili elijwayelekile lokuvakasha futhi uyakubona lokho ngebhayisikili lami lokuvakasha lapha ngemuva kwami, ukuthi ishubhu eliphezulu liqonde kuma-handlebars kanye nesihlalo se-handlebars cishe sicishe, ukuze amabhayisikili amaningi okuvakasha enziwe ngensimbi kodwa kusekhona amanye enziwe nge-aluminium, inzuzo yokuba nohlaka lwensimbi ukuthi izinzile ngokwengeziwe futhi yenza ukuhamba okushelelayo njengoba kukhuphuka izigaxa zomgwaqo futhi kulula futhi ukulungisa. Uma unekhefu kufreyimu ungashisela ifreyimu eyinsimbi, kepha ifreyimu ye-aluminium inzima kakhulu, ohlangothini lokususa iyasinda kancane kepha njengoba usuvele ulayisha ithani lezinto ebhayisikili lakho, lokho Mhlawumbe amabhayisikili amaTouring angabalulekile kangako nawo anochungechunge olude futhi lokhu kudalelwe izinto ezimbalwa, ikakhulukazi isikhala esithe xaxa phakathi kwesihlangu sakho ne-pannier ukuze kuthi lapho unyathela kungabi bikho ingozi yokuthi isithende sakho sishaye i-pannier ebhayisikili lomjaho.
Lokhu kuhlala kwamaketanga kuncane kakhulu, ngakho-ke uma ubungafaka ama-panniers kubhayisikili lakho lomjaho, ungahle ungene ku-pannier lapho uqala ukugebha. Enye inzuzo yesitelingi eside ukuthi ubuye ube ne-wheelbase ende, okusho ukuthi ibanga phakathi kwezindawo ezimbili ezinamasondo. Ukuhamba ngokuzinzile lapho unezinto eziningi ebhayisikili lakho, enye into okufanele uyazi ngohlaka ukuthi Uhlaka lunezinhlamvu eziningi zamehlo ukuze indawo yokubeka imithwalo, izivikelo zodaka namakheji amabhodlela zikwazi ukunamathiselwa kalula ibhayisikili, okungukuthi ifreyimu uqobo, izimfoloko kanye nabashiya phansi.
Amabhayisikili amaningi okuvakasha eza neqoqo lezintaba zebhayisikili elinekhabethe elintathu ngaphambili nekhasethi elinejubane elingu-9 noma le-10 ngemuva, ngakho-ke uma uzama igiya eliphansi kakhulu ucabanga ukuthi angisoze ngasebenzisa lokho kushintshwa kwegiya, kodwa uma wenza Uma usugibele ibhayisikili elilayishwe ngokugcwele, nakanjani uzojabula ukuba nalo. Ukushintshwa kwamagiya ebhayisikili lokuvakasha muva nje, amagiya amahabhu afana nePinion neRohloff asedume kakhulu futhi anenzuzo eyodwa enkulu, okuwukuthi awakwazi ukunakekelwa cishe lapho usohambweni lwakho lwebhayisikili, kodwa futhi eza ngentengo AmaDola angeziwe ngaphezulu kwezindleko zebhayisikili lakho lokuvakasha futhi kukhona nokubuyela emuva okukodwa okuyikho uma kukhona okungahambi kahle ngehabhu yangaphakathi yamagiya lapho usohambeni lwakho ngebhayisikili kungasho ukuthi ukugibela ibhayisikili lakho sekuphelile. Kuzodingeka ukuthi uphinde uthumele ihabhu kubakhiqizi uma kwenzeka into efanayo uma unohlelo lwendabuko lwedilili, ungahlola wena noma ume nje esitolo esiseduze sebhayisikili futhi bazokusiza amahora ambalwa noma kunjalo futhi ungaqhubeka nohambo lwakho lwebhayisikili.
Kubalulekile ukuba nesondo eliqinile ukumelana namandla wonke amagiya owalayishayo ebhayisikilini angamelana nawo. Isincomo sami kungaba ukukhetha isondo elikhulume ngama-36, ngakho-ke ngokwamasondo kunendlela eyodwa kuphela futhi lokho kuyisondo lokufaka ubufakazi bokubhoboza. La mathayi wokuhlola ukubhoboza asinda kancane, kepha njengoba uhambisa izinto eziningi ukugibela ibhayisikili lakho, akunandaba ukuthi isondo linesisindo esingamagremu ambalwa ngaphezulu.
Isondo eliqinisa ukubhoboza isondo lisho ukuthi ungacisha ukuthi kungenzeka ukuthi ithayi liqhume. Amathayi asindayo ngokobubanzi besondo ngincoma ukuthi kukhethwe isondo elinobubanzi bamathayi okungenani ama-millimitha angama-35 noma ama-37, okuqinisekisa ukuhamba kahle futhi kusiza Ukugwema lezo zingcwecwe ezimbi bheka ukuthi yiluphi uhlobo lwamabhuleki ozolisebenzisa ukuhamba ngebhayisikili uma kufanele ukhethe amabhuleki ediski noma amabhuleki erimu futhi-ke, njenganoma yini enye, kukhona ukungalungi nezinzuzo, lapho siqala ngamabhuleki erimu kunezinzuzo eziningi Okokuqala nje zishibhile impela futhi kulula ukusho uma iphedi yamabhuleki igugile, kulula futhi ukufaka esikhundleni samaphedi futhi imvamisa ungathola izingxenye ezizishintshayo kalula, kepha kukhona izingqinamba ezinamabhuleki erimu. Okokuqala, awanawo amandla wokumisa amaningi njengama-disc brakes futhi awasebenzi kahle ezimeni ezimanzi.
Ububi besithathu bamabhuleki erimu ukuthi amaphedi aguga ngokuhamba kwesikhathi - ngizokhipha usebe uqobo, ngakho-ke kuzodingeka ukuthi ushintshe isondo ngemuva kweminyaka embalwa. Ngakho-ke uma sibheka amabhuleki ediski njengoba nginawo ebhayisikili lami, anamandla amaningi okuma futhi athembekile kakhulu emanzini, kepha ukwehla ukuthi izingxenye zibiza kakhulu futhi la mabhuleki kunzima kakhulu ukuwasebenzisa lapho Usuphumile futhi usazobuya, futhi kungahle kube yinkohliso encane ukuthola iphedi yokubhuleka elungile yebhayisikili lakho, ngakho-ke lapho usohambweni lwebhayisikili, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuthi ube nephedi yamabhuleki ezongena esikhundleni sakho. Ekugcineni, kuya ngohlobo lohambo ohlela ukulwenza uma uhamba esifundeni sezintaba esinemvula eningi njengaseNorway, isiphakamiso sami bekungaba ukuthi b ngingakhetha amabhuleki ediski, kepha uma uhambela kakhulu ama-flatlands hhayi amandla amakhulu kangako amabhuleki njengalapha eSweden, ngingahle ngiphakamise ukuthi ngikhethe amabhuleki erimu.
Enye into okufanele uyicabangele lapho uthenga ibhayisikili lokuvakasha uhlobo lwezibambo ozifunayo. Izinhlobo eziyinhloko zezibambo zebhayisikili lokuvakasha kungaba ibha yokudonsa noma isibambo esiyisicaba. Ubuhle bendawo yokudonsa efana nale enginayo ebhayisikili lami ukuthi unezandla ezahlukahlukene ezahlukahlukene.
Uma unebha eyisicaba futhi izandla zakho zisesimeni esifanayo usuku lonke, yithi amahora amahlanu kuya kwayisishiyagalombili, lokho kusho ukuthi lokhu kungenzeka ukuthi uthole ukuba ndikindiki nobuhlungu obuningi emajoyintini akho, ezandleni nasentanyeni yezandla. into enhle, futhi kube nezinhlobonhlobo eziningi zezinhlobo zokubamba ze-hybrid emakethe muva nje, njengezibambo zikaJones kanye nezibambo zevemvane ukuze lezi zinhlobo zithole okungcono kakhulu kuwo womabili la mazwe. Usenezibambo ezisicaba, kepha ungasicisha isikhundla sakho uma izandla zakho zigwema ukuba ndikindiki nobuhlungu ebengikhuluma ngabo, onogada nakho kuyinto eyodwa okufanele uyicabangele uma uthenga ibhayisikili lokuvakasha uma uzoba nabakho ngeSonto kuphela emgaqweni. Abagcini bamadaka ababalulekile kangako kuwe.
Mhlawumbe ungakhetha ukuthi uluthathe nini uhambo lwakho lwangeSonto, kepha uma uke wagibela ibhayisikili, yithi, amasonto ambalwa, kungenzeka uhlangabezane nohlobo oluthile lwemvula ngalesi sikhathi, ngakho-ke kungakuhle ukuba ube nezilindi zodaka ku ibhayisikili lakho lokuvakasha kungenzeka likongele isikhathi nobunzima ngoba akudingeki uchithe isikhathi esiningi uhlinzeka ngebhayisikili lakho ngemuva kosuku lwemvula futhi uhlanza wonke amapotimende namabhantshi emvula njalonjalo. Ukunamathisela onogada ebhayisikili lakho kuvame ukuba lula, kepha okufanele ukunake ukuthi unemvume eyanele yamathayi ukuze ukwazi ukufaka isondo lakho kanye nomvikeli ohlakeni lwakho olukhethekile lwebhayisikili. Ngakho-ke esihlokweni sokugcina sithole mayelana nencazelo ye-.
ujusi wesithombo sebhitrudi
Uma ukhuluma ngalokho, ukuthola isihlalo esihle sebhayisikili lakho lokuvakasha, ngoba leli yiphuzu lokuxhumana eliphakathi komzimba wakho nebhayisikili futhi mhlawumbe uzohlala kulesi sihlalo amahora amaningi nsuku zonke lapho usohambweni lwebhayisikili. Nginesihlalo seBrooks B17 ngokwami ​​futhi leso sihlalo esihle impela, kodwa siyabiza, siqinile futhi sijwayela isimo sakho somzimba ngokuhamba kwesikhathi ukuze sakheke kahle phakathi kwakho nebhayisikili kodwa ngicela uthathe isikhathi sakho Lapho ucwaninga amasali ibhayisikili lakho lokuvakasha kubalulekile ukuthi uthole isihlalo esihle esilingana kahle nawe. Ama-pedals ngokuvamile awafakiwe ekuthengeni ibhayisikili lokuvakasha, ngakho-ke uzodinga ukuthenga lokhu ngokwehlukana.
Sengivele ngenze i-athikili ekhuluma ngendaba yezilwane ezifuywayo, engiyincomayo ngohambo lwamabhayisikili. Ngakho-ke uma uqhafaza isixhumanisi ekhoneni eliphezulu ngizokubona kule ndatshana uze ube nokuhle ngokuzayo
Ingabe kukhona amashubhu amelana nameva?
Kukhulu kakhulu. Ukuzivikela okuhle kakhulu kuma-punctures azo zonke izinhlobo, yize kukhokhela ukumelana okugudlukayo kepha ubungeke uqaphele kuthebhu ethwele noma ekusetshenzisweni kwentaba nge-dynohub. Mhlawumbe okuhlala isikhathi eside kakhuluishubhuNgifikile ngangenaezinyeiminyaka engamashumi amabili eyinqaba! I-460g iningi le-ishubhu!
Yini ongayenza ngebhayisikili enameva?
I-Pair of Thorn Catchers ngiyisebenzisele ukugibela amakilabhu, i-audax, kanye nokuvakasha ehostela, yize ngingakusebenzisanga ngokwanele, njengamabhayisikili amaningi kakhulu. I-Kenda ameva emelana nebhayisikili ithubhu langaphakathi - mnyama. Sine ukuthengisa lokhu kwentsha ameva ibhayisikili edolobheni.
Bangobani abakhiqizi bamabhayisikili ahambela ameva?
Imijikelezo Yokujikeleza ye-Bespoke. Imijikelezo Yameva, singabakhiqizi bohlu oluhlonishwa kakhulu lwamabhayisikili weThorn kanye neTandem. Siqamba futhi sakhe wonke amabhayisikili endlini, sisebenzisa iminyaka yamadizayini azanyiwe futhi ahlolwa. Yonke ibhayisikili esiyakhayo isezingeni eliphakeme kakhulu ukuze ilungele ukusetshenziswa kwayo okuhlosiwe.
Sivulwa nini isitolo se-Thorn cycle?
Ameva emijikelezo manje asevulekele ukuthengiswa kwamabhayisikili. NgoMsombuluko, ngoLwesibili nangoLwesine u-08.00 kuye ku-16.00. Ngenxa yegciwane lengculaza i-Covid 19 asikwazi ukuba nesikhathi sokuthengisa lapha emagcekeni. Amaqoqo manje aseyatholakala ngezinyathelo zokuqedwa kwezenhlalo ezenziwayo futhi alikho ithuba lokuxoxa / ukulungiswa okwedlule.